कसरी छुट्टाउने सक्कली र नक्कली नेपाली नोट ? सरल रुपमा छुट्टाउने तरिका हेनुहोस् | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर आर्थिक कसरी छुट्टाउने सक्कली र नक्कली नेपाली नोट ? सरल रुपमा छुट्टाउने तरिका...
कसरी छुट्टाउने सक्कली र नक्कली नेपाली नोट ? सरल रुपमा छुट्टाउने तरिका हेनुहोस्
बिहिबार सदरमुकाम बेनीको एक मेडिकल हलबाट एउटा बैंकमा खुद्रा पैसा साट्न जाने क्रममा नेपाली एक हजारको नक्कली नोट भेटियो । यो बेनीमा नौलो होइन्, हरेक बर्ष फाटफुट नक्कली नोट भटिन्छ । मेडिकल, वित्तिय संस्था, भिडभाड हुने स्थानमा विगतमा बर्षमा समेत नक्कली नोट भेटिने गरेको थियो । भट्ट हेर्दा सक्कली जस्तै देखिने नक्कली नोटलाई सचेत हुन सकेमा सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ ।
अहिलेसम्म नक्कली नोटको कारोबार गर्ने बेनीमा भेटिएका छैनन् तर, भिडभाड हुने स्थान र मेडिकलमा भेटिने नक्क्ली नोट अन्तिममा वित्तिय संस्थामा पुगेर मात्रै पहिचान हुने गरेको छ । कोरोनाबाट जोगिन सरकारले जारी गरेको लकडाउनको अवधिमा नक्कली नोट धेरै देखिन सक्ने भएकाले सक्कली र नक्कली नोट यसरी पहिचान गर्न सकिन्छ ।
पानी छाप: नेपाली नोटको दायाँ भागको खाली ठाउँलाई प्रकाशतिर फर्काएर हेर्यौ भने लाली गुराँसको पानी छाप स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । नक्कली नोटमा यस्तो पानी छाप अस्पष्ट र अलि कालो धब्बा जस्तो देखिन्छ।
सुरक्षा धागो: नेपाली नोटमा प्रयोग गरिएको सुरक्षा धागो फोटोकपी गर्न सकिदैन । फोटोकपी गरिएको सुरक्षा धागो कालो र त्यसमा छापिएको अक्षर छोएिको जस्तो देखिन्छ । सुरक्षा धागोलाई नियालेर हेर्ने हो भने धागोमा लचद लचद हुन्छ ।
अग्रपृष्ठ संयोजन:रुपैयाँ १००,५००,१००० दरको नोटलाई प्रकाशतिर फर्काएर हेर्दा पानी छाप भएको कोठाको बाहिरपट्टि(बायाँतिर) भएको बुट्टा र त्यसको पछाडिपट्टि भएको बुट्टा मिलेर लचद भन्ने शब्द बन्छ । नक्कली नोटमा त्यसको लाइन फरक देखिन्छ ।
अझै सरल रुपमा छुट्टाउने सात तरिका
स्रोतः राष्ट्र बैंक र एजेन्सी